Su’aal Kasta Ka Jawaab, Si laguu Fahmo! | Dhaymoole News
Su’aal Kasta Ka Jawaab, Si laguu Fahmo!
Calaamadaha aftahanimada waxa ka mid ah in ay kaa muuqato inaad jeceshahay inaad dadka wax u sheegto, isla markaana ay dadku xiiseeyaan arimaha aad ka hadlayso. Inaad si fudud dadka waxa uga dhaadhicisaa oo ay iyagu kugu raacaan ayaa ah inaad tahay qof aftahan ah oo dadka wax ka kasban kara. Weligaa ka jawaab su’aalaha ay ku weydiiyaan adigoo degan dhamaantood, markaasi ayay aqbalayaan wixii aad doonaysay inaad u sheegto. Waana arin la baran karo ama uu Allah (sw) hibo kuu siiyo inaad noqoto aftahan.